ग्यास्ट्रिक निर्मुल पार्ने ५ उत्कृष्ट घरेलु उपचार ! - Jagaran Post
ग्यास्ट्रिक निर्मुल पार्ने ५ उत्कृष्ट घरेलु उपचार !
जागरणपोस्ट ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १०:१०
के हो ग्यास्ट्रिक ?
ग्यास्ट्रिक पेटको भित्री भागमा हुने जलन वा दुखाई हो । यो अचानक हुनसक्छ र एक देखि तिन दिन सम्म रहन सक्छ । कहिले काही ग्यास्ट्रिक एक हप्ता सम्म लम्बिन सक्छ र एकदम दुखाईपुर्ण हुन्छ । नेपालका अधिकांश मानिस ग्यास्ट्रिक बाट ग्रसित छन् । बिभिन्न रोग र खानपिन नमिल्नाले नेपालमा ग्यास्ट्रकका रोगिहरु प्रत्येक वर्ष बढिरहेका छन् ।
के तपाइ पनि ग्यास्ट्रिक बाट ग्रसित हुनुहुन्छ तरु अनेक औषधीहरु प्रयोग गरेर पनि ग्यास्ट्रिक को पिडा बाट छुटकारा पाउन सक्नु भएको छैनरु यदि तेस्तो समस्या छ भने तुरुन्त यि ५ घरेलु उपचार अपनाउनुहोस् । तपाई एक हप्तामा ग्यास्ट्रिकको समस्याबाट मुक्त हुनुहुनेछ !
ग्यास्ट्रिकका ५ उत्कृष्ट घरेलु उपचारहरुः
नरिवल पानी पिउनाले ग्यास्ट्रिकको पिडालाई कम गर्छ। नरिवल पानीमा फाइवरको मात्रा बढि हुन्छ, जस्ले पाचन प्रकृयालाई मध्दत गर्छ र पेटमा एसिडिटि हुन दिदैन। नरिवल पानीले पेटको भित्री भागलाई चिसो पार्दछ र पेटको पोलाईलाई कम गर्दछ।
चिसो पानी र दुई चम्चा चिनिः
एक गिलास बरफ चिसो पानीमा दुई चम्चा चिनि मिसाएर राम्रो संग घोल्नुहोस र पिउनुहोस । यदि जरुरि परेमा दोहोर्याउनुहोस । यो ग्यास्ट्रिकको दुखाई कम गर्ने उत्तम उपाय हो । एक गिलास बरफ चिसो पानीले शरिरको तरलतालाई सन्तुलित राख्ने काम गर्दछ । त्यसैले एक गिलास चिसो पानी पिएर हल्का हिड्दा ग्यास्ट्रिक कम हुन्छ ।
मेवा पनि ग्यास्ट्रिकको लागि अमृत सरह काम गर्छ । पेटको पोलाई मेटाउन काचो मेवा खानु उत्तम हुन्छ । काचो मेवामा २-३ थोपा कागतिको रस मिसाएमा अझ राम्रो संग ग्यास्ट्रिकको निवारण हुन्छ ।
अदुवा ग्यास्ट्रिकको निवारण लागि एकदम उत्तम हुन्छ। विभिन्न गुण हुने अदुवामा ब्याक्टेरिया बिरोधि र पोल्न नदिने तत्व हुन्छ । यसले पेटको भित्री भागमा हुने जलनलाई कम गर्छ । थोरै अदुवालाई पानीमा उमाल्नुहोस र बिरिनुन मिसाएर पिउनिहोस। तपाईको दुखाईलाई तुरुन्त कम गर्नेछ ।
बन्दामा भिटामिन ‘U’ हुन्छ जसले अल्सर लाई निको पार्दछ । भिटामिन ग् ले पेटको भित्रि भागमा हुने जलनलाई हटाउछ र केहि दिनमै ग्यास्ट्रिकबाट छुटकारा दिलाउछ । तपाईले बन्दालाई सानो टुक्रा पारेर मिक्सरमा जुस बनाउनुहोस र पिउनुहोस । २-४ दिनमै तपाई पेटको समस्याबाट मुक्त हुनुहुनेछ ।
कोभिड-१९ विरूद्धको खोपको बारेमा सामान्य जानकारी
पीसीआर नेगेटिभ भएमात्र भारतमा प्रवेश पाइने
यस्ता छन् तिते करेलाका फाईदाहरु
कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेहरुप्रति श्रद्धाञ्जलीस्वरुप अमेरिकामा पाँच दिनको
उमेरभन्दा पहिलै कपाल फूल्ने समस्या छ ? यस्ता
भारतबाट १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप काठमाडौँ आइपुग्यो
गर्भावस्थामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु !
‘कोभिशिल्ड’ खोप १० लाख डोज आज काठमाडौं आइपुग्ने
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८८ जनामा कोरोना संक्रमण
१.कोभिड-१९ विरूद्धको खोपको बारेमा सामान्य जानकारी
२.हेटौँडामा ट्रकको ठक्करबाट सफारी चालकको मृत्यु
३.संसद्‌भित्र नेकपाको संघर्ष झन् जटिल बन्दै
४.देश दुर्घटना हुनबाट जोगिएको नेता पौडेलको दाबी
५.प्रधानमन्त्री केपी ओली नैतिक संकटमा
६.सवारी दुर्घटनामा परि बरिष्ठ अधिबक्ता बाबुराम पन्थीको मृत्यु
७.ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दै
८.तपाईंको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ ? २०७७ फागुन-१३ गते, बिहीवार
९.दुई वर्षभित्र इटहरीका ग्रामीण मूलबाटो कालोपत्र गरिने
१०.पशुपतिमा सुनको जलहरी नराख्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश